Cajiibka Thailand wuxuu ku foorarayaa wai: The Rosewood Bangkok, oo ah hudheelka khasaaraha COVID
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Cajiibka Thailand wuxuu ku foorarayaa wai: The Rosewood Bangkok, oo ah hudheelka khasaaraha COVID
Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Markii la furay Rosewood waxay dib u qaabaysay cirka Bangkok. Rosewood Bangkok waa 30-dabaq, muuqaal ahaan yaab leh, yaab yaab dhismeed oo toosan. Qaabkeeda casriga ah waxaa dhiirrigeliyay waay, tilmaanta caanka ah ee Thai ee salaanta. Silhouette -ka casriga ahi waa muujinta hal -abuurka ee ruuxa Thai. Dhaqanka hodanka ah ee Thai ayaa sidoo kale lagu nuuxnuuxsaday qaybaha naqshadeynta gudaha iyo astaamaha biyaha ee ku jira hudheelka raaxada ah ee lagu maamuuso Bangkok, oo ah magaalo lagu dhisay biyo.
Hoteelka Rosewood Bangkok oo ka kooban 30 dabaq oo ku yaal Bangkok, Thailand ayaa ka mid ah meheradaha martigelinta ee halganka xun ku habsaday cudurka COVID-19.
Xayiraadaha la saaray socdaalka caalamiga ah ayaa ku dhowaad xayiray socodka socodka dalxiiska.
“Shaqaalaha Rosewood waxaa lagu wargeliyay ku dhawaaqista xiritaanka Talaadadii,” wakiil huteel ayaa yiri, iyadoo hoteelka la xirayo Sabtida.
Wakiilka ayaa ka gaabsaday magaciisa, waxaana hoteelka uu ka gaabsaday inuu faah faahin dheeri ah ka bixiyo.
Markii la furay Rosewood Bangkok wuxuu sheegay in loo qoondeeyay in loo sameeyo astaan ​​naqshad cusub oo loogu talagalay caasimadda Boqortooyada iyo masraxa adduunka. Hadda COVID-19 ayaa dishay.
Rosewood Bangkok waa mashruuc suuq -geyn ah oo ay soo saartay Rende Development Co., Ltd. oo ay leeyihiin qoyska Thaksin Shinawatra, ra'iisul wasaarihii hore ee Thailand.
Paetongtarn “Ing” Shinawatra, Ku-xigeenka Madaxa Fulinta ee Rende oo ah gabadha Thaksin, ayaa ku soo qortay Facebook: “Xiritaanka ku-meel-gaarka ah ee Rosewood Bangkok waxaa loola jeedaa in dib loo yagleelo meel aan la hubin.
Badbaadada dhammaan shaqaalaha hoteelka iyo martida ayaa loo tixgeliyaa mudnaanta, ayay tidhi.
Dad badan oo indha -indheeya ayaa ka walwalsan in huteelka laga yaabo in la iibiyo ama la magac -bixiyo kadib xidhitaanka.
Marisa Sukosol Nunphakdi, madaxweynaha Ururka Hoteelada Thai, ayaa ugu baaqay dowladda inay u oggolaato goobaha wax lagu cuno ee hoteellada in dib loo furo iyadoo la raacayo amarka si loo fududeeyo xayiraadaha saaran maqaayadaha.
Xarumaha jimicsiga, barkadaha dabaasha, iyo qolalka shirarka ee hoteellada waa in sidoo kale loo oggolaadaa xeerar, ayay tiri Marisa.